၂၀၂၀ ဓါတု နိုဘဲလ်ဆု အပိုင်း ၂ - မျိုးဗီဇ တည်းဖြတ်နည်းသစ်
မျိုးဗီဇ DNA ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာအစိတ်အပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ တိတိကျကျ ဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့ မျိုးဗီဇ ကပ်ကျေး Crispr-Cas9 "genetic scissors" ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ၂ ဦးကို ၂၀၂၀ အတွက် ဓါတုဗေဒနိုဘယ်ဆု ပူးတွဲ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၀ အတွက် ဓါတုဗေဒ နိုဘဲလ်ဆုရခဲ့တဲ့ အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင် ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ Jennifer Doudna နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသူ ဖြစ်တဲ့ ဂျာမဏီက (Max Planck Unit for the Science of Pathogens ) ရောဂါဗေဒဌာနက သုတေသနပညာရှင် ဒေါက်တာ Emmanuelle Charpentier တို့ ၂ ဦး တွေ့ရှိခဲ့တဲ့မျိုးဗီဇကပ်ကျေး လို့ခေါ်တဲ့ Crispr-Cas9 "genetic scissors" ကိုသုံးတဲ့ မျိုးဗီဇ တည်းဖြတ်နည်းသစ်ဟာ လူသားတွေ အတွက် နေရာ အတော်များများမှာ အသုံးချနိုင်တယ်လို့ နာဆာ သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာပဒေသာတင်က ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဆဲလ်တွေထဲမှာ ရှိတဲ့ ဗီဇကို တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာက သိပ်မြန်ပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် သုံးလို့ ရတာတွေကတော့ အများကြီးပါ။”
မေး။. ။“ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘဲယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Cales Gustafsson ကလည်း ဒီ မျိုးဗီဇနည်းသစ်က တကယ့်ကိုအစွမ်းထက်ပြီး၊ အခြေခံသိပ္ပံပညာကို တော်လှန်ဆန်းသစ်လိုက်တာအပြင်၊ ကုထုံးသစ်ကြီးတွေ၊ ကောက်ပဲသီးနှံမျိုးသစ် တီထွင်မှုတွေ ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင် ဒီနည်းသစ်ကြောင့် မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ရောဂါတွေအပြင်၊ ကင်ဆာကိုတောင် ကုသနိုင်ဖို့ လမ်းစဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် သုံးတာတွေကို မပြောခင် ဆေးကုသရေးမှာ ဘယ်လို သုံးနေတယ် ဆိုတာ ကြည့်ရအောင်ပါ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဥပမာ အားဖြင့် နှလုံး အစားထိုး ကုတာတို့၊ မွေးလာကတည်းက ရောဂါပါလာပြီးတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကုလို့ မရဘူး ဆိုရင် ကုဖို့အတွက်က gene tharapy ဗီဇကုနည်းနဲ့ ကုလို့ ရပြီ။ ကုလည်း စကုကြည့် ပါပြီ။
မွေးကတည်းက ရောဂါပါလာမယ် ဆိုရင် ဒီရောဂါပါမလာအောင် မျိုးရိုးဗီဇကို သန္ဓေသား စတည်ကတည်းက ကင်ဆာမဖြစ်နိုင်တဲ့ ဗီဇကို ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်။ အဲဒါကို လုပ်လို့ ရပါပြီ။ နောက် မွေးမွေးလာချင်းမှာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကုလို့ မရတဲ့ ကင်ဆာနဲ့ မွေးလာတဲ့ ကလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ လိုင်လာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အင်ဂလန်က။ သူ့မိဘတွေကို ဆရာဝန်တွေက ပြောတယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကုလို့ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗီဇနည်းနဲ့ ကုကြည့်မယ်။ ဒီတနည်းပဲ ရှိတော့တယ်။ လက်ခံမလား ဆိုတော့ ဒီတနှစ်ကလေးကို ကုကြည့်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဒီကလေးက ခုထိ အသက်ရှင်တုန်းပဲ။”
သိပ်တန်ဖိုးရှိတာကတော့ နှလုံး အစားထိုး ကုတာ။ အသဲအစားထိုးကုတယ်။ ကျောက်ကပ် အစားထိုး ကုတယ် ဆိုတဲ့ဟာ၊ အဲလိုကုမယ့် အစား တိရိစ္ဆာန်ကနေပြီးတော့ ဥပမာအားဖြင့် ဝက်။ သူက အရွယ်တူတဲ့အတွက် အဲဒီ နှလုံးကို ပြောင်းလို့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဇီဝ ခန္ဓာကိုယ်က အပြင်ကဝင်လာတဲ့ ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဆိုလို့ရှိရင်သူက ချက်ချင်းပြန် အံထုတ်တယ်။ တွန်းထုတ်တဲ့ အတွက်. အဲဒီ နှလုံးတို့ ကျောက်ကပ်တို့က ကိုယ်နဲ့ မတဲ့တဲ့ အတွက် သူက အလုပ် မလုပ်ပဲနဲ့ သေသွားတယ်။
အခုကျတော့ သူက တိရိစ္ဆာန်ထဲမှာ မွေးတဲ့ ၊ မွေးယူတဲ့ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး ဖြစ်သော်လည်း လူရဲ့ ဗီဇနဲ့ တွဲပြီးတော့ သူ့ကို မွေးပေးလိုက်တယ်။ နှလုံးကို ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီ နှလုံးက လူထဲကို ပြန်ထည့်တဲ့ အတွက် နှလုံး အစားထိုး ကုတာ ပေါ့နော်။ Organ transplant တွေမှာ အရမ်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
မေး။. ။“ဆေးပညာလောကအတွက် သိပ်အသုံးဝင်သလို စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ မှာရော ဘယ်လို တခေတ်ဆန်းစေ နိုင်မှာပါလဲ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဒီစိုက်ပျိုးရေးမှာ ဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းတဲ့ အသီးအနှံတွေ ထွက်မယ်။ ပိုပြီးတော့ အရသာ ရှိတာတွေ ထွက်မယ်။ ပြီးတော့ ရာသီဥတုဒဏ် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ drought resistance လို ဟာမျိုး အပင်တွေကို ထုတ်နိုင်မယ်ပေါ့။ နောက်ပြီး မမွှေးတဲ့ပန်းကို မွှေးအောင် လုပ်လို့ရပါပြီ။ နောက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပန်း၊ အခု သူတို့ သုတေသန လုပ်တာ အများကြီး ပေါ်လာပါပြီ။ ပန်းကို အရောင် ပြောင်းလို့ ရပါပြီ။ အဲဒီ စိုက်ပျိုး ရေးနဲ့ သုတေသနပေါ့နော်။.
ဥပမာ ဆိုလို့ရှိရင် ပိုးစုန်းကြူးက အလင်းရောင် ရှိတယ်။ ညကျရင် လက်လက် လက်လက်နဲ့ ပေါ့နော်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူ့မှာ မီးစုန်းဓါတ် ရှိတဲ့ အတွက် အလင်းရောင် ကလေးတွေ လက်လက် လက်လက်နဲ့ ဖြစ်နေတာ။ အဲဒီ ပိုးစုန်းကြူးရဲ့ လက်လက် လက်လက် ဖြစ်တဲ့ ဗီဇ လေးကို သွား ထုတ်ပြီးတော့ ဆေးရွက်ကြီး အပင်ကို စိုက်တဲ့ အခါ ဒီအပင်ထဲမှာ ဒီဗီဇ လေးကို ထည့်ပေးလိုက်လို့ ရတယ်။ အဲဒီလို ထည့်ပေးထားတဲ့ အပင် ကြီးလာတဲ့ အခါ ကျတော့ ညကျလို့ရှိရင် ဆေးရွက်ကြီး အပင်တပင်လုံးက လင်းနေ အောင် ပြောင်းလိုက်လို့ရပြီ။ အဲဒီတော့ လူတွေက ဘယ်လောက်အထိအောင် ထွင်လာနိုင်မလဲ ဆိုတော့ လမ်းမီးတိုင် အစား အပင်ကြီးတွေ စိုက်လို့ရှိရင် အပင်ကြီးတွေက ညကျရင် တပင်လုံး လင်းထိန်နေအောင် လုပ်လို့ ရမယ်လို့ စဉ်းစား လာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မျိုး ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ အပင်၊ စိုက်ပျိုးရေးမှာဆို ရေ အများကြီး မလိုပဲနဲ့ အပင်ကို သန်အောင် လုပ်မယ်။ အဲဒါမျိးတွေပေါ့။ ”
မေး။. ။“အခုလို အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းသစ်ကို တလွဲအသုံးချမိရင် အန္တရာယ်ကလည်း အလွန်ကြီးပါတယ်။ ဘယ်လို အန္တရာယ် မျိုးပါလဲ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“မကောင်းတဲ့ ဘက်မှာ သုံးတဲ့ဟာ ကြောက်ဖို့ အကောင်းဆုံး ကတော့၊ သန္ဓေသား ဗီဇကို ပြောင်းလိုက်လို့ ရမယ်ဆိုတော့၊ ကောင်းသွားမှာလည်း ရှိတယ်။ ဆိုးသွားမှာလည်း ရှိတယ်။ ကောင်းသွားမှာတွေ ထဲမှာတော့ ဆံပင်မကျွတ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ အရပ်ပုမယ် ထင်လို့ရှိရင် အရပ်ရှည်အောင် လုပ်ပေးလို့ရမယ်။ သူကမျိုးရိုးကို ကြည့်လိုက်မယ်လေ။ အရပ်ပုတဲ့ မျိုးရိုးဆို အရပ်ရှည်အောင်ရတဲ့ ဗီဇမျိုးရိုးကို ဖြတ်တောက်ပြီး ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်။ သန္ဓေတည်စ ကတည်းက။ လူကို လှအောင်လည်း ဖန်တီးလို့ရမယ်။
အဲ ပြဿနာက ဘာလည်းဆိုတော့ အဲဒီလို ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဗီဇက သနေ္̕ဓဗီဇထဲမှာ ပါသွားတဲ့အတွက် မျိုးစဉ် တောက်လျှောက် အဲဒီလိုကို ပါသွားတော့မှာ။ သဘာဝက သူ့ဟာသူနေနေတာ မဟုတ်ဖူး၊ တချိန်မှာ ခုနက လိုပေါ့နော်။ မှန်နေတဲ့ ဗီဇကနေပြီးတော့ မှားသွားပြီးတော့ ဒီ instruction ကလေးက ပြောင်းသွားလို့ ရှိရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ မပြောတတ်ဘူး။ လူသားမျိုးရိုး ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ အဲဒါ ကို အရမ်းကြောက်တာ။ အဲဒီတော့ အဲဒါကို မလုပ်ဖို့ အတွက်ကို ပြောတာ။
အဲဒီ အချိန်မှာပဲ တရုတ်ပြည်က ဗီဇသုတေသန လုပ်တဲ့ ပညာရှင် တယောက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က အဲဒါကို သန္ဓေသားဗီဇထဲ ထည့်ပြီး အမေကို မွေးခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ အမွှာလေး ၂ ယောက် မွေးတယ်။ ဘာဖြစ်လာအုံးမလဲ ဆိုတာ မသိသေးဘူး။ အခုမှ ၂ နှစ် လောက်ပဲ ရှိသေးတာကိုး။ နောက် ဆယ်နှစ်လောက်ကျရင် ဘာဖြစ်မလဲ၊ အသက်ကြီးလာရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ နောက် သူတို့ကနေ အိမ်ထောင်ပြုလို့ ကလေးမွေးလာရင် ဘယ်လို ပုံစံ ထွက်လာမလဲဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ မရဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကောင်းရင်တော်သေးတယ်။ ဆိုးတဲ့ဟာ အရမ်းဆိုးသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ လူသားမျိုးရိုး ပြောင်းသွားမလား ဆိုတဲ့အတွက် တကမ္ဘာလုံးက ဥပဒေတွေ ထုတ်ဖို့ လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီသုတေသနနဲ့ သန္ဓေဗီဇကို ထည့်ပေးပြီးတော့ မွေးလိုက်တဲ့ တရုတ်ပြည်က သိပ္ပံပညာရှင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လောက်က ထောင် ၃ နှစ် ချလိုက်တယ်။ တရုတ်အစိုးရက။ အဲဒီလောက် အထိကို အထိတ်တလန့်ပါပဲ။ကောင်းတာတွေရှိသလို မကောင်းတာတွေလည်း အများကြီး ပါပဲ။”
မေး။.။“ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် test လုပ်တဲ့ အခါမှာ အသုံးကျတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ အသုံးကျတာပါလဲ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။.။“ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် positive ဖြစ်တယ် မဖြစ်ဖူး ဆိုတာကို သိအောင် စမ်းသပ်တဲ့ အခါ အာခေါင်ထဲမှာ ရှိတာကိုထုတ်ပြီး စမ်းတဲ့အခါ Crispr-Cas9 လို့ ခေါ်တဲ့ နည်းနဲ့ စမ်းလိုက်လို့ရှိ
ရင် အရင်က ရက်နဲ့ ချီကြာမယ့် အစား အခုဆိုရင် နာရီပိုင်းအတွင်း ရတယ်။”
၂၀၂၀ အတှကျ ဓါတုဗဒေ နိုဘဲလျဆုရခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ သိပ်ပံပညာရှငျ ကယျလီဖိုးနီးယား တက်ကသိုလျက ပါမောက်ခ Jennifer Doudna နဲ့ ပွငျသဈနိုငျငံသူ ဖွဈတဲ့ ဂြာမဏီက (Max Planck Unit for the Science of Pathogens ) ရောဂါဗဒေဌာနက သုတသေနပညာရှငျ ဒေါကျတာ Emmanuelle Charpentier တို့ ၂ ဦး တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ မြိုးဗီဇကပျကြေး လို့ချေါတဲ့ Crispr-Cas9 "genetic scissors" ကိုသုံးတဲ့ မြိုးဗီဇ တညျးဖွတျနညျးသဈဟာ လူသားတှေ အတှကျ နရော အတျောမြားမြားမှာ အသုံးခနြိုငျတယျလို့ နာဆာ သိပ်ပံပညာရှငျ ဒေါကျတာပဒသောတငျက ပွောပါတယျ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဆဲလျတှထေဲမှာ ရှိတဲ့ ဗီဇကို တညျးဖွတျနိုငျတဲ့ဟာက သိပျမွနျပွီးတော့ ထိထိရောကျရောကျ လုပျနိုငျတဲ့ အတှကျ သုံးလို့ ရတာတှကေတော့ အမြားကွီးပါ။”
မေး။. ။“ဓာတုဗဒေဆိုငျရာ နိုဘဲယျကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ Cales Gustafsson ကလညျး ဒီ မြိုးဗီဇနညျးသဈက တကယျ့ကိုအစှမျးထကျပွီး၊ အခွခေံသိပ်ပံပညာကို တျောလှနျဆနျးသဈလိုကျတာအပွငျ၊ ကုထုံးသဈကွီးတှေ၊ ကောကျပဲသီးနှံမြိုးသဈ တီထှငျမှုတှေ ရှိလာတော့မှာ ဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပွငျ ဒီနညျးသဈကွောငျ့ မြိုးရိုးလိုကျတဲ့ ရောဂါတှအေပွငျ၊ ကငျဆာကိုတောငျ ကုသနိုငျဖို့ လမျးစဖှငျ့ပေးလိုကျတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍအတှကျ သုံးတာတှကေို မပွောခငျ ဆေးကုသရေးမှာ ဘယျလို သုံးနတေယျ ဆိုတာ ကွညျ့ရအောငျပါ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဥပမာ အားဖွငျ့ နှလုံး အစားထိုး ကုတာတို့၊ မှေးလာကတညျးက ရောဂါပါလာပွီးတော့ ဘယျနညျးနဲ့မှ ကုလို့ မရဘူး ဆိုရငျ ကုဖို့အတှကျက gene tharapy ဗီဇကုနညျးနဲ့ ကုလို့ ရပွီ။ ကုလညျး စကုကွညျ့ ပါပွီ။
မှေးကတညျးက ရောဂါပါလာမယျ ဆိုရငျ ဒီရောဂါပါမလာအောငျ မြိုးရိုးဗီဇကို သန်ဓသေား စတညျကတညျးက ကငျဆာမဖွဈနိုငျတဲ့ ဗီဇကို ထညျ့ပေးလိုကျလို့ရတယျ။ အဲဒါကို လုပျလို့ ရပါပွီ။ နောကျ မှေးမှေးလာခငျြးမှာ ဘယျနညျးနဲ့မှ ကုလို့ မရတဲ့ ကငျဆာနဲ့ မှေးလာတဲ့ ကလေးတယောကျရှိပါတယျ။ လိုငျလာလို့ ချေါပါတယျ။ အငျဂလနျက။ သူ့မိဘတှကေို ဆရာဝနျတှကေ ပွောတယျ။ ဘယျနညျးနဲ့မှ ကုလို့ မရဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဗီဇနညျးနဲ့ ကုကွညျ့မယျ။ ဒီတနညျးပဲ ရှိတော့တယျ။ လကျခံမလား ဆိုတော့ ဒီတနှဈကလေးကို ကုကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါကတြော့ ဒီကလေးက ခုထိ အသကျရှငျတုနျးပဲ။”
သိပျတနျဖိုးရှိတာကတော့ နှလုံး အစားထိုး ကုတာ။ အသဲအစားထိုးကုတယျ။ ကြောကျကပျ အစားထိုး ကုတယျ ဆိုတဲ့ဟာ၊ အဲလိုကုမယျ့ အစား တိရိစ်ဆာနျကနပွေီးတော့ ဥပမာအားဖွငျ့ ဝကျ။ သူက အရှယျတူတဲ့အတှကျ အဲဒီ နှလုံးကို ပွောငျးလို့ရတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဇီဝ ခန်ဓာကိုယျက အပွငျကဝငျလာတဲ့ ကိုယျနဲ့မတူတဲ့ အင်ျဂါအစိတျအပိုငျး ဆိုလို့ရှိရငျသူက ခကျြခငျြးပွနျ အံထုတျတယျ။ တှနျးထုတျတဲ့ အတှကျ. အဲဒီ နှလုံးတို့ ကြောကျကပျတို့က ကိုယျနဲ့ မတဲ့တဲ့ အတှကျ သူက အလုပျ မလုပျပဲနဲ့ သသှေားတယျ။
အခုကတြော့ သူက တိရိစ်ဆာနျထဲမှာ မှေးတဲ့ ၊ မှေးယူတဲ့ ကြောကျကပျ၊ နှလုံး ဖွဈသျောလညျး လူရဲ့ ဗီဇနဲ့ တှဲပွီးတော့ သူ့ကို မှေးပေးလိုကျတယျ။ နှလုံးကို ထုတျပေးလိုကျတယျ။ အဲဒီ နှလုံးက လူထဲကို ပွနျထညျ့တဲ့ အတှကျ နှလုံး အစားထိုး ကုတာ ပေါ့နျော။ Organ transplant တှမှော အရမျး အသုံးဝငျပါတယျ။
မေး။. ။“ဆေးပညာလောကအတှကျ သိပျအသုံးဝငျသလို စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍ မှာရော ဘယျလို တခတျေဆနျးစေ နိုငျမှာပါလဲ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဒီစိုကျပြိုးရေးမှာ ဆိုရငျ ပိုပွီးကောငျးတဲ့ အသီးအနှံတှေ ထှကျမယျ။ ပိုပွီးတော့ အရသာ ရှိတာတှေ ထှကျမယျ။ ပွီးတော့ ရာသီဥတုဒဏျ ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျတဲ့ drought resistance လို ဟာမြိုး အပငျတှကေို ထုတျနိုငျမယျပေါ့။ နောကျပွီး မမှေးတဲ့ပနျးကို မှေးအောငျ လုပျလို့ရပါပွီ။ နောကျ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပနျး၊ အခု သူတို့ သုတသေန လုပျတာ အမြားကွီး ပျေါလာပါပွီ။ ပနျးကို အရောငျ ပွောငျးလို့ ရပါပွီ။ အဲဒီ စိုကျပြိုး ရေးနဲ့ သုတသေနပေါ့နျော။.
ဥပမာ ဆိုလို့ရှိရငျ ပိုးစုနျးကွူးက အလငျးရောငျ ရှိတယျ။ ညကရြငျ လကျလကျ လကျလကျနဲ့ ပေါ့နျော။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူ့မှာ မီးစုနျးဓါတျ ရှိတဲ့ အတှကျ အလငျးရောငျ ကလေးတှေ လကျလကျ လကျလကျနဲ့ ဖွဈနတော။ အဲဒီ ပိုးစုနျးကွူးရဲ့ လကျလကျ လကျလကျ ဖွဈတဲ့ ဗီဇ လေးကို သှား ထုတျပွီးတော့ ဆေးရှကျကွီး အပငျကို စိုကျတဲ့ အခါ ဒီအပငျထဲမှာ ဒီဗီဇ လေးကို ထညျ့ပေးလိုကျလို့ ရတယျ။ အဲဒီလို ထညျ့ပေးထားတဲ့ အပငျ ကွီးလာတဲ့ အခါ ကတြော့ ညကလြို့ရှိရငျ ဆေးရှကျကွီး အပငျတပငျလုံးက လငျးနေ အောငျ ပွောငျးလိုကျလို့ရပွီ။ အဲဒီတော့ လူတှကေ ဘယျလောကျအထိအောငျ ထှငျလာနိုငျမလဲ ဆိုတော့ လမျးမီးတိုငျ အစား အပငျကွီးတှေ စိုကျလို့ရှိရငျ အပငျကွီးတှကေ ညကရြငျ တပငျလုံး လငျးထိနျနအေောငျ လုပျလို့ ရမယျလို့ စဉျးစား လာတယျ။ နောကျပွီးတော့ မြိုး ဒီ့ထကျကောငျးတဲ့ အပငျ၊ စိုကျပြိုးရေးမှာဆို ရေ အမြားကွီး မလိုပဲနဲ့ အပငျကို သနျအောငျ လုပျမယျ။ အဲဒါမြိးတှပေေါ့။ ”
မေး။. ။“အခုလို အလှနျအသုံးဝငျတဲ့ နညျးသဈကို တလှဲအသုံးခမြိရငျ အန်တရာယျကလညျး အလှနျကွီးပါတယျ။ ဘယျလို အန်တရာယျ မြိုးပါလဲ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“မကောငျးတဲ့ ဘကျမှာ သုံးတဲ့ဟာ ကွောကျဖို့ အကောငျးဆုံး ကတော့၊ သန်ဓသေား ဗီဇကို ပွောငျးလိုကျလို့ ရမယျဆိုတော့၊ ကောငျးသှားမှာလညျး ရှိတယျ။ ဆိုးသှားမှာလညျး ရှိတယျ။ ကောငျးသှားမှာတှေ ထဲမှာတော့ ဆံပငျမကြှတျအောငျလုပျလို့ရမယျ။ အရပျပုမယျ ထငျလို့ရှိရငျ အရပျရှညျအောငျ လုပျပေးလို့ရမယျ။ သူကမြိုးရိုးကို ကွညျ့လိုကျမယျလေ။ အရပျပုတဲ့ မြိုးရိုးဆို အရပျရှညျအောငျရတဲ့ ဗီဇမြိုးရိုးကို ဖွတျတောကျပွီး ထညျ့ပေးလိုကျလို့ရတယျ။ သန်ဓတေညျစ ကတညျးက။ လူကို လှအောငျလညျး ဖနျတီးလို့ရမယျ။
အဲ ပွဿနာက ဘာလညျးဆိုတော့ အဲဒီလို ဖနျတီးလိုကျတဲ့ဗီဇက သနေ်̕ဓဗီဇထဲမှာ ပါသှားတဲ့အတှကျ မြိုးစဉျ တောကျလေြှာကျ အဲဒီလိုကို ပါသှားတော့မှာ။ သဘာဝက သူ့ဟာသူနနေတော မဟုတျဖူး၊ တခြိနျမှာ ခုနက လိုပေါ့နျော။ မှနျနတေဲ့ ဗီဇကနပွေီးတော့ မှားသှားပွီးတော့ ဒီ instruction ကလေးက ပွောငျးသှားလို့ ရှိရငျ ဘာဖွဈလာမလဲ ဆိုတာ မပွောတတျဘူး။ လူသားမြိုးရိုး ပွောငျးသှားနိုငျတယျ။ အဲဒါ ကို အရမျးကွောကျတာ။ အဲဒီတော့ အဲဒါကို မလုပျဖို့ အတှကျကို ပွောတာ။
အဲဒီ အခြိနျမှာပဲ တရုတျပွညျက ဗီဇသုတသေန လုပျတဲ့ ပညာရှငျ တယောကျက လှနျခဲ့တဲ့ ၃ နှဈလောကျက အဲဒါကို သန်ဓသေားဗီဇထဲ ထညျ့ပွီး အမကေို မှေးခိုငျးလိုကျတာပေါ့နျော။ အမှာလေး ၂ ယောကျ မှေးတယျ။ ဘာဖွဈလာအုံးမလဲ ဆိုတာ မသိသေးဘူး။ အခုမှ ၂ နှဈ လောကျပဲ ရှိသေးတာကိုး။ နောကျ ဆယျနှဈလောကျကရြငျ ဘာဖွဈမလဲ၊ အသကျကွီးလာရငျ ဘာဖွဈမလဲ။ နောကျ သူတို့ကနေ အိမျထောငျပွုလို့ ကလေးမှေးလာရငျ ဘယျလို ပုံစံ ထှကျလာမလဲဆိုတာ ဘယျလိုမှ ပွောလို့ မရဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ကောငျးရငျတျောသေးတယျ။ ဆိုးတဲ့ဟာ အရမျးဆိုးသှားရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ၊ လူသားမြိုးရိုး ပွောငျးသှားမလား ဆိုတဲ့အတှကျ တကမ်ဘာလုံးက ဥပဒတှေေ ထုတျဖို့ လုပျတယျပေါ့နျော။ အဲဒီသုတသေနနဲ့ သန်ဓဗေီဇကို ထညျ့ပေးပွီးတော့ မှေးလိုကျတဲ့ တရုတျပွညျက သိပ်ပံပညာရှငျကို ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈလောကျက ထောငျ ၃ နှဈ ခလြိုကျတယျ။ တရုတျအစိုးရက။ အဲဒီလောကျ အထိကို အထိတျတလနျ့ပါပဲ။ ကောငျးတာတှရှေိသလို မကောငျးတာတှလေညျး အမြားကွီး ပါပဲ။”
မေး။. ။“ကိုဗဈ ၁၉ အတှကျ test လုပျတဲ့ အခါမှာ အသုံးကတြယျလို့ ပွောပါတယျ။ အဲဒါ ဘယျလို ပုံစံနဲ့ အသုံးကတြာပါလဲ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ positive ဖွဈတယျ မဖွဈဖူး ဆိုတာကို သိအောငျ စမျးသပျတဲ့ အခါ အာခေါငျထဲမှာ ရှိတာကိုထုတျပွီး စမျးတဲ့အခါ Crispr-Cas9 လို့ ချေါတဲ့ နညျးနဲ့ စမျးလိုကျလို့ရှိ
ရငျ အရငျက ရကျနဲ့ ခြီကွာမယျ့ အစား အခုဆိုရငျ နာရီပိုငျးအတှငျး ရတယျ။”